FaceTime Isiri Kushanda Pane iPhone? Heino Chikonzero & Iyo Gadzira! - Iphone
iphone charger port isiri kushanda
ipad haisi kuzouya zvachose
ipod kuchaja chiteshi kusiri kushanda
iphone 6 inobata skrini isinganzwisisike
FaceTime Isiri Kushanda Pane iPhone? Heino Nei & Iyo Gadzira!
FaceTime inzira yakanaka yekubatana neshamwari dzako uye nemhuri. Asi chii chinoitika kana FaceTime ikasashanda nenzira yazvinofanira? Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei FaceTime isiri kushanda pane yako iPhone, iPad, uye iPod uye sei kugadzirisa FaceTime painenge ichikupa dambudziko.
Kuti uwane mhinduro yako, chingotsvaga mamiriro ako pazasi, uye iwe unozogona kufunga maitiro ekuti uwane yako FaceTime ishande zvakare. Ita shuwa yekuverenga izvo zvekutanga kutanga, usati waenderera mberi.
FaceTime: Iyo Basics
FaceTime Apple's chat chat app, uye inoshanda chete pakati pemidziyo yeApple. Kana uine Android foni, PC, kana chero chimwe chigadzirwa chisiri Apple chigadzirwa, haugone kushandisa FaceTime.
Kana iwe uri kuyedza kutaurirana nemumwe munhu asina Apple chishandiso (senge iPhone kana Mac laptop), saka hauzokwanise kutaura nemunhu iyeye kuburikidza neFaceTime.
zvinorevei kuona gora
FaceTime iri nyore kushandisa kana iri kushanda nemazvo. Tisati taenderera mberi, ngatiendei pamusoro pekuishandisa, kungoona kuti uri kuita zvinhu nemazvo.
Ini Ndinoshandisa Sei FaceTime Pane Yangu iPhone?
Kutanga, enda kune yako Contacts app uye tinya pairi .
Paunenge iwe uri mukati meapp, tinya kana kubaya pazita remunhu waunoda kufonera . Izvi zvinokutora iwe kupinda kupinda kwemunhu iyeye muVakabatana. Iwe unofanirwa kuona sarudzo yeFaceTime pasi pezita remunhu iyeye.
Dzvanya kana tora paFaceTime .
Kana iwe uchida odhiyo-chete kufona, tinya kana tora pane bhatani reKudaira. Kana iwe uchida kushandisa vhidhiyo, tinya kana tinya pane Bhatani Rekufona bhatani .
Inoita FaceTime Kushanda Pane iPhone, iPad, iPod, kana Mac?
Mhinduro ndi 'hongu' kune vese vari vana, iine miganhu ine musoro. Ichashanda paMac ine OS X yakaiswa kana chero eanotevera madivayiri (kana anotevera mamodheru): iPhone 4, yechina chizvarwa iPod Kubata, uye iPad 2. Kana uine mudziyo wekare, saka haugone ita kana kugamuchira FaceTime mafoni.
Maitiro Ekugadzirisa Matambudziko NeFaceTime pane iPhone, iPad, uye iPod
Ita shuwa kuti Wakanyorerwa mukati Neako Apple ID
Kuti ushandise FaceTime, unofanirwa kusainwa muApple ID yako, uyezve nemunhu waunoda kutaura naye. Ngatitangei nekuona kuti wakasainwa neApple ID yako.
Enda ku Zvirongwa -> FaceTime uye ita shuwa kuti switch iri pamusoro pechidzitiro padhuze neFaceTime yakavhurwa. Kana switch isipo, tinya iyo kuvhura FaceTime. Pasi paizvozvo, iwe unofanirwa kuona Apple ID uine ID yako yakanyorwa, uye foni yako neemail pazasi payo.
Kana iwe ukapinda, zvakanaka! Kana zvisiri, wobva wasaina uye edza kufona zvakare. Kana iko kufona kuchishanda, saka wakanaka kuenda. Kana ichiri kusashanda, edza kumisikidza mudziyo, izvo zvinogona kugadzirisa matambudziko nekubatana nesoftware zvinopa seFaceTime.
Mubvunzo: Ino FaceTime Haishande Nemumwe Munhu Kana Munhu Mumwe Chete?
Heino mutemo unobatsira wechigunwe: Kana FaceTime isiri kushanda nechero ani, ingangove iri dambudziko ne iPhone yako. Kana ikasashanda nemunhu mumwe chete, ingangove dambudziko pane iyo iPhone yemumwe munhu, iPad, kana iPod.
Sei isingatarisi FaceTime Kushanda Nemunhu Mumwe Chete?
Mumwe wacho anogona kunge asina FaceTime yakavhurwa, kana panogona kunge paine dambudziko re software ne iPhone yavo, kana netiweki yavari kuyedza kubatana nayo. Kana usina chokwadi, edza kuita FaceTime kufona nemumwe munhu. Kana iko kufona kukaenda kuburikidza, iwe unoziva yako iPhone iri OK - ndiye mumwe munhu uyo ​​anofanirwa kunge achiverenga ichi chinyorwa.
iphone 7 skrini isiri kubatidza
3. Uri Kuedza Kubata Munhu Asina Basa?
Kunyangwe kana iwe nemunhu wauri kuyedza kutaura naye muine FaceTime account, izvo zvinogona kunge zvisiri zvese nyaya. Apple haina FaceTime sevhisi munzvimbo dzese. Iyi webhusaiti inogona kukubatsira iwe kuziva iyo nyika nevatakuri vanoita uye vasingatsigire FaceTime . Nehurombo, Kana iwe uri kuyedza kushandisa FaceTime munzvimbo isingatsigirwe, hapana chaungaite kuti iite kuti ishande.
4.Iye Firewall Kana Yekuchengetedza Software Kupinda Mune Iyo Nzira?
Kana iwe uine firewall kana imwe nzira yekuchengetedza internet munzvimbo, saka zvinogona kunge zvichidzivirira madoko anotadzisa FaceTime kushanda. Unogona kutarisa rondedzero ye zviteshi zvinoda kuvhurwa kuti FaceTime ishande pawebhusaiti yeApple. Nzira yekudzima software yekuchengetedza inosiyana zvakanyanya, saka uchafanira kushanyira webhusaiti inogadzira webhusaiti kuti ubatsirwe nezvakataurwa.
Troubleshooting FaceTime Chishandiso neDhivha
Kana iwe uchine nyaya neFaceTime mushure mekuyedza zvigadziriso zviri pamusoro, tsvaga chako chishandiso pazasi uye tinokutora iwe uende nezvimwe zvimwe zvigadziriso zvaunogona kuyedza. Ngatitangei!
yangu iphone 6 inoramba ichidzima
Paunoshandisa FaceTime pane yako iPhone, zvinoda kuti iwe usayinwe mukati neApple ID pane mamwe majaira, uye iwe zvakare unofanirwa kuve uine cellular data plan. Vazhinji vanopa waya vasina waya vanoda chirongwa chedata kana iwe ukatenga chero smartphone, saka unogona kunge uine imwe.
Kana iwe usiri kuda kushandisa yako cellular data chirongwa, iwe hausi munzvimbo yekufukidzira kune yako data chirongwa, kana kana iwe uchinetseka nebasa rako, ipapo iwe uchafanirwa kubatana kune Wi-Fi. Imwe nzira yekutarisa ndeyekutarisa padyo nepamusoro pechiratidziri chako. Unogona kuona iyo Wi-Fi icon kana mazwi senge 3G / 4G kana LTE. Kana iwe uine yakaderera chiratidzo chesimba, FaceTime inogona kusakwanisa kubatana.
Tarisa uone yedu imwe chinyorwa kana uine kunetseka kubatanidza yako iPhone neWi-Fi .
Kana iwe usingakwanise kubatana neinternet ne iPhone yako kana usiri paWi-Fi newe vari kubhadhara chirongwa chedata, iwe uchazoda kubata nharembozha yako mupi kuti uve nechokwadi chekuti hapana kushaikwa kwebasa kana dambudziko nebhiri rako.
Imwe imwe yekukurumidza kugadzirisa iyo dzimwe nguva inoshanda nePhones kana FaceTime isiri kushanda kudzora yako iPhone nzira yese kubva wozodzoka zvakare. Nzira yekudzima yako iPhone inoenderana nekuti ndeipi modhi yaunayo:
iPhone 8 uye kupfuura : Dhinda uye bata pasi bhatani rako re iPhone simba kusvikira 'slide kuti idzime simba' yaonekwa. Rova zvakasimba ikoni yemagetsi kuruboshwe kurudyi kuvhara yako iPhone. Dhinda uye ubatisise bhatani remagetsi zvakare kuti udzorerezve.
iPhone X uye nyowani : Dhinda uye ubatisise bhatani rako re iPhone uye chero bhatani revhoriyamu kudzamara 'slide yekudzima simba' yaonekwa Wadaro, Rova zvakasimba simba icon kubva kuruboshwe kurudyi mhiri kwechidzitiro. Dhinda uye bata pasi bhatani repadivi kuti uvhure yako iPhone zvakare.
Kana FaceTime isiri kushanda paPod yako, ita shuwa kuti wapinda neApple ID yako. Iwe zvakare unofanirwa kuve uine chokwadi chekuti iwe uri munzvimbo yakatetepa yeWi-Fi network, uye zvakaringana mune yakasimba chiratidzo chiratidzo. Kana iwe usina kubatana neWi-Fi, saka haugone kuita FaceTime kufona.
Macs inoda kuve yakabatana neinternet uchishandisa Wi-Fi kana nhare mbozha yekuita FaceTime mafoni. Kana iwe uine chokwadi chekuti Mac yako yakabatana neinternet, izvi ndizvo zvekuyedza:
Gadzirisa Apple ID Nyaya PaMac
Kutanga yakavhurika Spotlight nekudzvanya iyo yekukudza girazi icon mune yepamusoro kurudyi-kona yekona. Type FaceTime uye tinya kaviri kuti uvhure kana ichionekwa mune runyorwa. Dzvanya kuvhura iyo FaceTime menyu mukona yekumusoro kuruboshwe rekona uye tinya Zvaunofarira…
Iwindo iri rinokuratidza kana wakasaina neApple ID yako. Kana iwe usina kusaina, saina neApple ID yako uye edza kufona zvakare. Kana iwe watopinda kare uye iwe unoona Kumirira Kushanda, edza kusaina uye kudzoka mukati zvakare - yakawanda nguva, ndizvo chete zvinotora kugadzirisa dambudziko iri.
Ita shuwa Zuva Rako & Nguva Yakagadzwa Zvakarurama
Tevere, ngationgororei zuva uye nguva pane yako Mac. Kana vasina kumisikidzwa nenzira kwayo, FaceTime mafoni haapfuure. Dzvanya pane Apple menyu pakona yekumusoro yekuruboshwe rekona, wobva wadzvanya System Zvaunoda . Dzvanya pa Zuva & Nguva wobva wadzvanya pa Zuva & Nguva mune yekumusoro-yepakati yemenyu inoonekwa. Ita shuwa kuti Set Rwoga inogoneswa.
Kana zvisiri izvo, iwe uchazoda kubaya iyo yekuvharira mune yepazasi-kuruboshwe kona yekona uye pinda necomputer yako password kuti uite shanduko pane ino seti. Mushure mekupinda mukati, tinya iyo cheki bhokisi pedyo ne 'Seta zuva uye nguva otomatiki: kuibatidza. Ipapo sarudza guta riri padyo nenzvimbo yako kubva pane rondedzero yakapihwa uye vhara hwindo.
Ini ndaita Zvese Uye FaceTime Zvakadaro Hazvishande! Chii chandinoita?
Kana FaceTime ichiri kusashanda, tarisa gwaro raPayette Forward kune nzvimbo dzakanakisa dzekuwana rutsigiro rwe iPhone yako munharaunda uye online kune dzimwe nzira dzekuwana rubatsiro.
iphone yangu yakanamatira kuongorora kwegadziriro
FaceTime Matambudziko Akagadziriswa: Kuuputira Iwo Kumusoro
Hezvo unayo! Ndinovimba, FaceTime ikozvino iri kushanda pane yako iPhone, iPad, iPod, uye Mac, uye uri kutaurirana uchifara nemhuri yako neshamwari. Inotevera nguva FaceTime isiri kushanda, iwe unozoziva maitiro ekugadzirisa dambudziko. Inzwa wakasununguka kutibvunza chero mimwe mibvunzo pasi pazasi muchikamu chemashoko!